Ngoku kunokwenzeka ukugcina iXiaomi Mi Mix ngeGearBest yee-euro ezingama-593 | Iindaba zeGajethi
Ngoku kunokwenzeka ukugcina iXiaomi Mi Mix ngeGearBest yee-euro ezingama-593
Sele ziintsuku ezimbalwa uXiaomi wasishiya singathethi ngentetho ye Mi Mix, i-smartphone ene-6.4-intshi yesikrini ehlala kwi-91% yangaphambili ye-terminal. E-China, iiyunithi zokuqala ezazithengisiwe zahlala imizuzwana eli-10 kuphela, kodwa oko akuzange kuthintele ukubekelwa indawo ekubeni kuvulwe kwivenkile eyaziwayo yeGearBest.
Ukuba uthanda ngokupheleleyo iXiaomi Mi Mix sele unethuba lokuyigcina ngeGearBest nge Ixabiso lama-593 euros kwinguqulelo ene-4GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina kwangaphakathi, kunye nee-euro ezingama-674 ukuba ukhetha ukuxhomekeka kwinguqulelo ene-6GB ye-RAM kunye ne-256GB yogcino lwangaphakathi.
Khumbula ukuba le terminal intsha evela kumenzi waseTshayina ayisiyiveli nje kuphela kwiscreen sayo esikhulu esingafani nenye ngaphambili, kodwa ikwanazo nezona nkcukacha zinamandla zibeka ekuphakameni kwezinye zeefowuni ezihamba phambili kwintengiso .
Malunga nexabiso layo singatsho ukuba ayisiyoqoqosho kwaphela, nangona ukubuyisela siya kuba nefowuni ehluke ngokupheleleyo into esiyiqhelileyo. Ewe kunjalo, kuya kufuneka silumke kakhulu xa sisiwa kwaye kukuba sele bengaphezulu komsebenzisi omnye abakhalaze ukuba iscreen sigqibe ukophuka ngokupheleleyo emva kokubandezeleka kokungabalulekanga. Isakhelo esincinci kubonakala ngathi sinika ukungqinelana okuncinci kwiscreen ngokuchasene nokuwa okunokwenzeka.
Ngaba ucinga ngokufumana iXiaomi Mi Mix ngoku ukubhukisha kuvuliwe ngeGearBest?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ngoku kunokwenzeka ukugcina iXiaomi Mi Mix ngeGearBest yee-euro ezingama-593
I-Intex Aqua S9 Pro, intle, intle kwaye inexabiso eliphantsi kwi-smartphone, esele ithengisiwe eSpain
I-Apple izakubuyisa umohluko kwabo bathenga iadaptha ngaphambi kwesaphulelo